Garuwa magadate barete giddo (LibreOffice Basic IDE qipheessi, surki gari baqqeessame hee'reenna calla). Wirsaanchu borrote bortaje giddo worame calla hee'reenna miteekke surki qulfe gara magadi horoonsi'ra dandaatto(kiibordete aana hee'riro).
Surkote gari giddo,haaroo borro wirsaasinchu ofollara e'e nna aantanno borro qiniitiwidira soorrantanno.Wirsaasinchu hossimmote xuruuri gede ikke leellanno.
Hunte wori gari giddo albaanni noo borro haaroo borronni riqiwantanno. Wirsaanchu du'mu hossichu xuruuri gede ikke darga aguranno.
Title is: Surkote Gara